Natiijada 'Istanbul Walwalsan' ee Natiijada Xog-ururinta Istaatistikada ee IMM ee 'Coronavirus Survey' RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulNatiijada 'Istanbul Walwalsan' ee Natiijada Xog-ururinta Istaatistikada ee IMM ee 'Coronavirus Survey'
23 / 03 / 2020 34 Istanbul, GUUD, coronavirus, Headline, Gobolka Marmara, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
sahanka coronavirus of office ibb statistics istanbul kaygili
Xafiiska Tirakoobka Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul wuxuu sameeyay aragti, raadin iyo cilmi baaris ku saabsan cudurka coronavirus ee Istanbul. Boqolkiiba 75,2 jawaabeyaasha ayaa ka walaacsan coronavirus ku faafa laftiisa ama eheladooda. Heerka kuwa u maleynaya in dhaqaalaha qaranka uu ku dhacayaa waa 81,1 boqolkiiba. Gacmo dhaqistu waxay ahayd mid ka mid ah tillaabooyinka looga hortago cudurka coronavirus, boqolkiiba 64,3 boqolkiiba waxay ogaadeen in talaabooyinka ay qaadayaan dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ahi ku filan yihiin.
Intii u dhaxeysay 19-22 Maarso 2020, Xafiiska Istaatistikada Magaalada Istanbul ayaa sameysay sahan iyadoo xog aruurin ka sameysay 18 qof oo da’adoodu tahay 1.014 jir iyo in ka badan sahanka taleefanka gacansiiyay. 57,8 boqolkiiba kaqeybgalayaashu waxay ka yaraayeen 40 sano, iyo 42,2 boqolkiiba waxay ka badnaayeen 40 sano.
Boqolkiiba 73 ayaa qaba inay hayaan macluumaad ku filan
In kasta oo boqolkiiba 73,6 jawaabeyaasha ay u maleynayeen in ay hayaan macluumaad ku filan oo ku saabsan coronavirus, boqolkiiba 15,6 waxay caddeeyeen in aysan haynin macluumaad ku filan.
Boqolkiiba 60,2 ayaa la socda horumarka TV-ga
Heerka kuwa raacay horumarada ku saabsan coronavirus ee warbaahinta bulshada iyo bogagga wararka internetka ayaa ahaa 37,7 boqolkiiba. Boqolkiiba 60,2 ayaa telefishanka ku jira.
Muwaadiniintu ma qaadanayaan talaabooyin ku filan
Boqolkiiba 64,3 kaqeybgaleyaasha ayaa qaba in maamulada dhexe iyo kuwa maxalliga ahba ay qaateen tillaabooyinka loo baahan yahay. Boqolkiiba 55,1 ayaa sheegaya in muwaadiniintu aysan taxaddarin ku filan.
Gacmo dhaqista ayaa marka hore timaadda.
Taxaddarrada ka dhanka ah coronavirus, saddexda saf ee ugu horreeyay waxay si isdaba joog ah gacmaha u maydhayaan, kama baxaan guriga illaa ay lagama maarmaan noqoto iyo isticmaalka cologne.
Waxay xaddideysaa nolol maalmeedka
Heerka kuwa u maleynaya in coronavirus uusan saameyn ku laheyn nolol maalmeedka wuxuu ahaa boqolkiiba 12,9. 37,5 boqolkiiba kaqeybgalayaashu waxay cadeeyeen in aagagga dhaqdhaqaaqa iyo 35,1 boqolkiiba is dhexgalka ay yihiin kuwo xaddidan xaaladda coranavirus ee saameysa nolol maalmeedka.
Badi isweydaarsiga cuntada ayaa la sameeyay
Saamiga dadka ee waxbadan ka dukaamaysanaya coronavirus waxay ahaayeen 25,9 boqolkiiba. 70 boqolkiiba dadkaasi waxay door bideen alaabada cuntada iyo 25,3 boqolkiiba waxay doorbidaan qalabka nadaafadda.
Mid ka mid ah afartii qofba mid ayaa qaba inuu dhakhso u qaadi doono cudurka
4,7 boqolkiiba jawaabeyaasha waxay u maleeyeen in cudurka coronavirus uu haleelay, halka 13 boqolkiiba ay sheegeen inaysan hubin. Si kastaba ha noqotee, boqolkiiba 25,1 kaqeybgaleyaasha ayaa qaba in cudurka loo yaqaan 'coronavirus' uu ku dhici karo mustaqbalka dhow.
Boqolkiiba 57,9 bulshada ayaa aad uga walwalsan
In kasta oo boqolkiiba 57,9 bulshada ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin cudurka 'coronavirus', boqolkiiba 18,1 waxay sheegeen inay qayb ahaan walwal qabaan. Heerka kuwa yiri ma welwelsan yihiin 24 boqolkiiba.
Welwelka bulshada waa ku sarreeyaa
Boqolkiiba 75,2 kaqeybgalayaasha daraasaddan waxay halis ugu jiraan ku faafinta coronavirus ama eheladooda,
Boqolkiiba 81,1 dhibaatooyinka dhaqaale ee fayraska keenay,
Boqolkiiba 70,4 adeegga waxbarashada ayaa la carqaladeeyey,
70,3 boqolkiiba iyaga ayaa ka xaddidan nolol maalmeedkooda,
41,6 boqolkiiba waxay ka walaacsan yihiin helitaanka cunno ee ku filan.
Heerka kuwa u maleynaya in dhaqaalaha qaranka uu si xun u saameyn doono waa 85 boqolkiiba.
Kiisaska coronavirus oo kordha ayaa la filayaa
boqolkiiba 66,2 ayaa ah kuwa la waraystay kordhin lahaa xaaladaha coronavirus ee Turkey, halka 17,4 boqolkiiba qabaa waa la dhimi doonaa.
In kasta oo boqolkiiba 31,3 kaqeybgaleyaashu ay qabaan in kiisaska coronavirus lagu xakameyn doono muddo hal bil gudaheed ah waddankeenna, heerka dadka u maleynaya in hannaanka xakameynta uu qaadan doono 2-3 bilood waa 49,3 boqolkiiba.
24 boqolkiiba ayaa raba in bandooga la xadido
Su'aalaha furan ayaa la waydiiyey kaqeybgalayaasha waxa ku saabsan talaabooyinka kale ee loo qaadayo dagaalka ka dhanka ah coronavirus. Marka la eego, 24 boqolkiiba kaqeybgaleyaasha ayaa muujiyay in bandoowgu uu xadidan yahay 1-2 toddobaad iyo saacado cayiman.
Marka laga soo tago tan, baahida loo qabo in laga baxo guriga, baahida loo qabo in la raaco nadaafadda iyo qawaaniinta kale, in la kordhiyo tirada tijaabooyinka iyo codsiyada karantiil, iyo in la faafiyo faa iidooyinka dhaqaale ee soo baxay.
Boqolkiiba kuwa yiri dhammaan talaabooyinka horey ayaa loo qaaday su'aasha ah waxa kale ee la sameyn lahaa waa 13 boqolkiiba.
Samsun iyo Corum's Fast Train ee riyooyinka iyo walwalka waa isku mid
BTS 7 Loo soo saaray sanad ka hor: Sanadka Waxaan ka walwalsaneynaa Qeybta Ankara-Konya ee B
TCDD Sanadka Xisaabaadka 2013
Turkey tirokoobka Institute of Road Traffic Accident Statistics
Konya ayaa Doorta Midabka Tijaabada Sahaminta